Mee nkasi obi Hebei Shouzheng Trading Co., Ltd.
You na-achọ ụdị ndụ ahụike na ụlọ ọrụ ngwaahịa ọgwụ? Are na-achọ ndị ọkachamara na ngwaahịa na mmepụta otu? Mgbe ahụ Hebei Shouzheng Trading Co., Ltd. ga-apụtachaghị nhọrọ gị kacha mma.
Hebei Shouzheng Technology Co., Ltd bụ onye nrụpụta nke Medicine ọdịnala nke nwere ahụmịhe na ọtụtụ afọ na ike ọrụ ike. Anyị na-etinye aka na nyocha ahụike, mmepe na ahịa n'ime otu ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu, anyị na-enye ọrụ nhazi nhazi OEM maka ụlọ ọrụ niile metụtara. N'iburu oke, ịdị mma dị mma, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya na nke ụdị ọkaibe, a na-eji ngwaahịa anyị n'ọtụtụ ọgwụ na ahụike yana ọrụ ndị ọzọ
Ngwaahịa anyị kachasị gụnyere nkpuchi ihu igwe, nkpuchi ahụike, nkpuchi nkpuchi, ọsụsọ, sọọsị ntutu, ihe mgbu, ntutu dị mkpa, ude akpịrị, akwa gricology, nitrile gloves, gloves nke PVC, matraasi akwa, swabs owu, ihe nlegharị anya, na ihe ndị ọzọ nwere ike iwepu ọgwụ gbasara ọgwụ, wdg
Anyị nwetara FDA, CE, ISO asambodo, na-ekwe nkwa ngwaahịa dị elu. Otu ndi ahia anyi nwere ezi ahia, ndi otu ahia ahia nwere aka ike, ndi nwere njikwa ike na ndi n’eto ihe ngosi a ga-enye gi aka oru. Ngwaahịa na-eme ka ndị mmadụ kwenye ma tụkwasị obi ma nwee ike izute mkpa akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na-agbanwe agbanwe.
Nzụ ahịa tupu ịre ahịa: a na-ahụ maka ịkacha azụmaahịa na ịhazi ọrụ n'efu. Kwado OEM / ODM omenala.
N'okpuru ọrụ nkwekọrịta: Mmejuputa njikwa njikwa ike nke ISO, nnyefe oge, nhazi ngwa agha nchekwa na ezigbo nkwado ego.
Ọrụ mgbe ire ere: Anyị ga - eji ịnụ ọkụ n'obi 100% dozie ma mepụta nde nke njehie nke nwere ike ịdị n'oge.
Ihe niile anyị na-eme, iji belata ọnụahịa ịzụta ihe gị na mmezi ya, yana ịsọ ike asọmpi ahịa mpaghara. Ọrụ SOSUN zuru oke, ga-azọpụta gị ọtụtụ ọrụ ma wetara gị ahụmịhe na-enye ọ .ụ.
Anyị nwere ike inye aka mee ka azụmahịa gị ka mma. Nabata ka anyị mee ka anyị mara ma ị nwere mmasị ọ bụla.
Tẹ: 0086- (0) 311-89201688